Xasilinta amni ee Caabudwaaq iyo tallaabooyinka Ciidanka Xooggu (CXD) qaadeen – Radio Daljir
Xasilinta amni ee Caabudwaaq iyo tallaabooyinka Ciidanka Xooggu (CXD) qaadeen
Maarso 13, 2020 9:42 g 0
Xaalka amni ee degmada Caabudwaaq oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid aad u xasilloon, kadib markii degmadaasi iyo deegaannada ay maamusho sannado is xigxigay ay galeen xaalado ammaan darro oo sababay khasaarooyin dhimasho, kuwo dhaawac iyo dib-u-dhacsanaan xagga hormarka degmada ah.
Xasillooni darradaasi haatan xalka nabadgelyo looga gudbay, muddada sannadaha ahna ka taagnayd degmada cWaaq iyo deegaannada hoosyimaada ayaa salka ku hayey is-collaysi xagga qabiilka ah, taasoo ka soo fuftay aanooyin ama dekenooyin si is dabajoog ah u dhacay oo lagu guuldarraysay xakamayntooda.
Haatan muddo sannad ah Caabudqaaq waxay ahayd mid amni lagu faano uu ka jiray, waxaana istaagay dhacdooyinkii ammaan-darro ee qabiilada ka dhexdhacayey, taasoo timid kadib markii dawladda dhexe ee federaalku sannadkii 2018 u qoondaysay ciidamo ka shaqeeya amniga degmada Caabudwaaq, kana hortaga falalka liddiga ku ah nabadgelyada, iyadoo ay ciidankaasi ku guulaysteen in ay qabtaan dadkii geystay falal dhawr ahaa oo degmada ka dhacay intii ciidamadaasi ay shaqaynayeen degmada.
Magaca hawlgal ee ciidankaasi waxaa uu ahaa ciidanka xasilinta, haddana inkastoo muddadaasi sannadka ah degganaansho wanaagsan uu ka jiray cWaaq, misna mar labaad ayaa la xoojiyey qorshaha amni ee degmada cWaaq, iyadoo loo magacaabay hoggaan cusub oo hawlgallada xasilinta ah.
G/sare Axmed Maxamed Guuleed waa taliyaha ciidanka xasilinta Caabudwaaq ee hadda, ciidankaasi oo ka tirsan qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo xeradooda fadhi ee ay ku magacaabanyihiin ay ku taallo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, ahna xarunta gobolka Galgaduud.
Wareysi gaar ah oo taliyaha ciidanka xasilintu uu siiyey Radio Daljir ayuu uga hadlay arrimo badan oo amniga la xiriira, siiba tallaabooyinka hirgalay ee ay ku guulaysteen, dambiyo dhacay iyo dadaallada ay ka gaysteen xal-u-helkooda, horukaca degmada ee hadda, hirgalka canshuurta, is dhexgalka bulshada iyo arrimo kale.
Wareysigaan oo uu la yeeshay Cabdifataax Cumar Geeddi, qaybtiisaan oo ah middii koowaad wuxuu uga hadlayaa taliyuhu arrimaha amniga.